फिल्मको प्रचार गर्न प्रदीपबाट सिक्ने कि ? « Ramailo छ
फिल्मको प्रचार गर्न प्रदीपबाट सिक्ने कि ?
नायक प्रदीप खड्का युवा स्टार हुन् । स्टार सँगै उनी एक कुशल बजार प्रवद्र्धक पनि हुन् । प्रवद्र्धक यस अर्थमा कि फिल्मको प्रचार कसरी व्यापाक बनाउने भन्ने ज्ञान प्रदीपलाई राम्रोसँग थाहा छ । यो ज्ञान उनले यही सातादेखि लाग्ने ‘लिलिबिली’ को प्रचारमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
‘लिलिबिली’ को प्रचारमा प्रदीपले कुनै कमी हुन दिएका छैनन् । सिटी टुर, मिडिया अन्र्तक्रियादेखि हाँस्यव्यांग्य टेलिफिल्मसम्म प्रदिपले ‘लिलिबिली’को प्रचार गर्न छोडेका छैनन् । यसको प्रभाव ‘लिलिबिली’ व्यापारमा देखिएला या नदेखिएला ? त्यो शुक्रबारको शोले देखाउँनेछ । यति चाहिं पक्का हो कि प्रदीपको सक्रिया प्रचारले ‘लिलिबिली’ को हाइप चाहिं बनेको छ । प्रदीप र जसितासँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
प्रदीपकै समकालिन कतिपय नायक प्रचार प्रसारबाट सक्रिय नभएको धेरै मेकर्सको गुनासो हुने गर्दछ । अनमोल केसी नै ‘कृ’ को प्रचारमा रिजर्भ भैदिए । युवा स्टारको गन्तीमा आउने अन्य नायकले प्रदीपको जति प्रचारमा सक्रियता देखिएको छैन । यसकारण आफ्नो फिल्मको प्रचार गर्न प्रदीपबाट सिक्ने कि ?